N95 imaski ukwenza umshini Abakhiqizi futhi abahlinzeki - China N95 imaski ukwenza umshini Factory
umshini wokukhiqiza imaski oyisicaba umshini we-earloop umhlinzeki womshini we-earloop umshini wobuso
1.Welding of izindlebe ezizibeni for KN95 buso.
2. Isikhala esishintshekayo, sikunikeze uhla olufanele lokukhetha.
3. Ukondla okwenziwa ngesandla, ukusika okuzenzakalelayo, ukushisela okuzenzakalelayo, ukusebenza kokulayishwa okuzenzakalelayo kuphephile futhi kulula.
4. Ukushisela okuzenzakalelayo kwemichilo yezindlebe zemaski, ukufaka esikhundleni esisheshayo sezindawo zokubeka ukuzivumelanisa nezinhlobo ezahlukahlukene zokukhiqizwa kwemaski.
5.Rotary ithebula yokusebenza, ezingasetshenziswa ngokushesha ukushintshanisa imaski futhi kwandiswe isivinini Welding.
I-Kn95 Mask Machine onqenqemeni wokubopha umshini wefektri Umshini owodwa wokubopha onqenqemeni umshini
1.Imishini yidivayisi yokuvala uphawu onqenqemeni olunezinga eliphansi lokwehluleka.
2. Inqubo esemqoka ngokuphakelwa ngesandla, i-ultrasonic welding edge.
3. Inqubo elula yokushisela, ukusebenza okulula nokuvunwa okuphezulu.
4. Ingakwazi ukuzivumelanisa nokukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zobuso bevemvane.
onqenqemeni ikhanda ibhande imaskhi Welding umshini abakhiqizi Isiteshi esisodwa nehele onqenqemeni banding umshini
Inqubo 2.the main by yokudla manual, ultrasonic Welding uphawu onqenqemeni.
Inqubo ye-3.Wimple Welding, ukusebenza okulula nokuvunwa okuphezulu.
4.Ingakwazi ukuzivumelanisa nokukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zobuso bevemvane.
I-5.Safety grating, lapho kukhona into endaweni yokuzwa, imishini izoma ngokuzenzakalela ukusebenza ukuqinisekisa ukuphepha kwe-opharetha.
china n95 imaski yokwenza umshini Ubuso Imaski Machine imaskhi ukusika umshini
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zemakethe, isikhunta singamane sithathelwe indawo ukuze sivumelane nokukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zemizimba yemaski yovemvane.
umshini wobuso bokuhlinza ongalahlwanga ongalahlwanga
Lo ngumshini othomathikhi ngokuphelele wokukhiqiza ulayini wokukhiqiza imaski wokugoqa. weld 3 kuya ku-6 izingqimba zendwangu engeyona ephothiwe ye-PP, indwangu yokuncibilika Ingabe imaski yokugoqa egcwele-ngaphakathi-eyodwa ingacutshungulwa imaski yokugoqa eyi-3 M9001 / 9002. Ngokuya ngezinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe, izifihla-buso zingahlangabezana nezindinganiso ezahlukahlukene, njenge-FFP1 / FFP2 / KN95 .. Ukusebenza akukho okudingekayo okwenziwayo kuyo yonke inqubo, okunganciphisa imfucuza yokushisela, ukugoqa, ukufaka uphawu, ukugoqa nokusika okungeyona ulayini wokukhiqiza -woven Izinto zayo ziqinisekisa ngempumelelo ikhwalithi yemaski ekhiqizwayo. Yonke imikhiqizo ikhiqizwa ngomshini.
imaski yobuso yokwenza umshini